Gresham Voting Center Express Opens - Somali | Multnomah County
Isniin, Oktoobar 12, 2020
Xarunta Codaynta Gresham waxay furan tahay Oktoober 12 - Noofember 3 Doorrasha Guud ee Noofember 3, 2020.
Laga bilaabo maanta, Oktoober 12, 2020 Xarunta Codaynta waxay ku dhax taal Dhisma Bari ee Degmada Multnomah ee 800 NE 8th Street ee Gresham waxaanu furan tahay Noofember 3, 2020 Doorashada Guud ee ah. Dhismaha Doorashada Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah ee Koonfubari Portland waxa ay usii furnaan doontaa shacabka. Labada gooboodba waxay raacaan dhamaan talooyinka amaanka ee ay bixisay Xarunta Kahortaga iyo Xakamaynta Xanuunku (Center for Disease Control and Prevention, CDC) oo ku waajibinaya inay xidhaan waji gashadka iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Cod bixiyayaal badani waxay sidoo kale ku buuxin karaan online ahaan. Wixii su'aalo ah, fadlan la hadal 503-988-VOTE (8683).
Xarunta Codbixinta suuqa hoose ee Gresham, codeeyayaashu waxay iska duwaan gelin karaan ama waxay ka cusboonaysiin karaan macluumaadkooda codeynta. Waxa aad sidoo kale heli kartaa warqada codaynta cusub si aad u badalato mid luntay ama waxyeelawday. Codeeyayaasha qaba laxaad la'aanta waxay heli karaan kaalmo. Codeeyayaasha ku hadla luuqad aan Ingiriisi ahayn waxay heli karaan kaalmo luuqada ay doorbidaan ah. Shaqaalaha doorashooyinka gaarka ah waxay diyaar u yihiin su'aalaha ama wixii kale ee kaalmo la xidhiidho ah caawimaada.
Xarunta Codaynta Gresham waxa ay furan tahay Isniin ilaa Jimce 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo. Waxa aanu sidoo kale bixinaa saacado dheeraad ah oo codaynta ah oo goobaha Gresham iyo SE Portland ah, waxaana kamid ah inay furnaan doonaan ilaa 7:00 habeenimo wakhtiga uu ku eeg tahay Isduwaan Gelinta Codeeyaha Oregon.
Waraaqaha codaynta waxaa kaliya la aqbalayaa saacada ay furan yihiin Xaruntamaha Cod Bixintu. Sanduuqa ugu dhaw ee 24-saacadood shaqaynaya ee codayntu waxa uu ku yaalaa baarkinka Laybareeriga Gresham ee 385 NW Miller Avenue.
Xasuusin Muhiim ah: Wakhtiga Uu Ku Eeg Yahay Isduwaan Gelinta Codeeyaha Oregon waxaa weeye bari, Oktoobar 13.
Bari, Oktoobar 13, 2020 waxaa weeye wakhtiga uu ku eeg yahay is duwaan gelinta codeeyaha ee codeeyayaasha Oregon ee cusub. Xarunta Codaynta ee Gresham iyo Dhismaha Doorashada Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah ee SE Portland waxay furnaan doonaan 8:00 subaxnimo ilaa 7:00 habeenimo si ay u caawiyaan dadka is duwaan geliyana ee imanaya. Waxa aad sidoo kale la hadli kartaa
503-988 VOTE (8683) wixii kaalmo ah.
Waxa aad iska duwaan gelin kartaa online ahaan adiga oo isticmaalaya liisan, ruqsad ama aqoonsi shaqaynaya www.oregonvotes.gov/register. Isduwaan gelinta online-ka ahi waxay ku eeg tahay 11:59 habeenimo bari, Oktoobar 13. Haddii aadan haysan Liiskanka Oregon ee baabur wadida, deganaanshaha, ama kaadh aqoonsi waxad u bahantahay inaad buuxiso warqada kaadhka Diwaangalinta codbixiyaha Oregon ee laga heli karo xafiiska boostada US, goobaha Maktabada Degmada Multnomah iyo laba xarumood oo codayn ah oo ku yaal SE Portland iyo Gresham. Kaadhadhka Isduwaan Gelinta Codeeyaha Oregon ee daabacan waa in lagu soo celiyaa mid kamid ah laba goobood ee adeegyada Doorashada Degmada Multnomah wixii ka horeeya 7:00 habeenimo Oktoobar 13 ama waa inaad kusoo celisaa boosta leh astaanta USPS Oktoobar 13, 2020.
Qorshayso Inaad CODAYS! Doorashada Guud ee Noofember 3, 2020
Doorashada Degmada Multnomah waxay kugu dhiiri gelinaysaa Inaad Qorshaysato Inaad CODAYSO! Liiska hubinta ee diirada saaraya ficilka wuxuu dul marayaa talaabooyinka daruuriga ah si loo xaqiijiyo in codkaaga la tiriyo:
Waraaqaha codaynta waxaa la bilaabi doonaa in boosta lagu soo diro Arbacada, Oktoober 14.
Doorashada Guud ee Noofember 3 ee Oregon waxaa kamid ah tartamaha Madaxweynaha Maraykanka, Xildhibaanada Maraykanka, Aqalka Wakiilada Maraykanka, Xog Hayaha Gobolka Oregon, Xisaabiyaha Gobolka, Xeer Ilaaliyaha Guud, kuraasta gobolka iyo kuwo kale oo badan. Codeeyayaashu waxay sidoo kale go'aansan doonaan talaabooyinka codaynta gobolka iyo deegaanka. Waraaqaha codaynta waxaa la bilaabi doonaa in boosta lagu soo diro Arbacada, Oktoobar 14 wax ka badan 560,000 oo codeeyaha ah oo ka duwaan gashan Degmada Multnomah. Waxa aad iska duwaan gelin kartaa adeaga La Socodka Waraaqahaaga Codaynta marka ay warqadaada codayntu boosta kusoo dhacdo. Waxa aad macluumaad dheeraad ah ka ogaataa adeega multco.us/trackyourballot.
Waxa keeni kartaa warqadaada codaynta sida ugu dhakhsaha badan maalinta xigta boosta ama Goobaha Sanduuqyada Rasmiga ah ee Lagu Diro Codka. Dhamaan Sanduuqyada Goobaha Codaynta Degmada Multnomah ee Rasmiga ah waxa ay ku jiraan multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-somali-0. Hadii aanad helin warqadaada codaynta Oktoober 22, qaad talaabo adiga oo kala hadlaya Doorashada degmada Multnomah 503-988 VOTE (8683).
Waraaqaha codaynta waa in ugu danbayn ay nasoo gaadhaan 8:00 Habeenimo Talaato, Noofember 3, 2020. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Doorashada Guud ee Noofember 3 ama Xarunta Cod Bixinta, fadlan booqo www.mcelections.org.
October 13, 2020 is the Voter Registration Deadline - Somali
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay cod bixiyaasha xasuusinaysaa in Talaatada, Oktoobar 13 keeda tahay maalinta ugu danbeeysa ee iska diiwaangelinta cod bixinta Doorashada Guud ee Noofember 3, 2020
Multnomah County Elections Helps Voters - Somali
Doorashooyinka Degmada Multnomah Waxay Ka Caawinaysaa Cod bixiyaasha Naadafada ah ama Cod bixiyaasha U Baahan in Laga Caawiyo Luuqadooda ay Door bidayaan